Or2 Photochromic Canopy Chimiro - Dhizaini magazini
Photochromic Canopy Chimiro
Photochromic Canopy Chimiro Or2 imwechete yepamusoro padenga chimiro inosangana neiro rezuva. Izvo zvikamu zve polygonal zvepasi zvinosangana nemwenje wekupedzisira-violet, ichigadzira mepu nzvimbo uye kuwedzera kwemagetsi ezuva. Kana iri mumumvuri, zvikamu zveOr2 zvakachena zvichena. Nekudaro kana zvarohwa nemwenje yezuva vanova vanopenda, vachifashamira nzvimbo iripazasi nemagetsi akasiyana ehu. Pakati pezuva Or2 inova shading mudziyo unongodzora nzvimbo pasi payo. Pausiku Or2 inoshanduka kuita chandelier yakakura, ichiparadzira chiyedza icho chave chakaunganidzwa nemasokisi efotovoltaic maseru masikati.
Zita rechirongwa : Or2, Vagadziri zita : Christoph Klemmt & Rajat Sodhi, Izita remutengi : Orproject.
Photochromic Canopy Chimiro Christoph Klemmt & Rajat Sodhi Or2